Taariikh Nololeedka Fariidkaa Bollywood-ka Varun Dhawan Maxaa Ka Taqaan (+Sawiro) – Filimside.net
Taariikh Nololeedka Fariidkaa Bollywood-ka Varun Dhawan Maxaa Ka Taqaan (+Sawiro)
April 24, 2018 Ali Aadan
Taariikhda: April 24, 2018
Varun Dhawan waxuu maanta u dabaal dagayaa sanad guuradiisa 31-aad maadama uu dhashtay maanta oo kale waxanaa idiin kaga heynaa macluumaad ku saabsaan jilaagan.
Varun waa fariidka Bollywood-ka sidoo kalena ah saaxiib guusha hooskiisa tahay madaama ilaa haatan filimkiisa ah lagu sheegin darajada (Flop) ama filim guul dareestay wuxuuna haatan Bollywood-ka ku jiraa mudo 4-sano ah.
Varun Dhawan wuxuu dhashay 24 April sanadii 1987 wuxuuna ku dhashay magaalada Mumbai aabihiis waa David Dhawan Director-ka ugu guulaha badan Bollywood-ka 25-sano ee ugu dambeesay.
Varun Dhawan sanadii 2012 ayuu Bollywood-ka kusoo biiray asigoo kusoo caan baxay filimkii Student of The Year oo ay la jileen xidigaha iyagana markaas fanka ku cusbaa Alia Bhatt iyo Siddharth Malhotra wuxuuna filimkaas gaaray guul wacan (Semi Hit).
Wixii markaas ka dambeeyay Varun Dhawan wadadiisa guulaha ayuu iska sii watay sidoo kalena wuxuu hogaanka u qabtay dhalinta Bollywood-ka ku cusub ee isku heestaan inay mustaqbalka Super Star ka noqdaan gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka.
Varun Dhawan Iyo Bilawgiisa Nolosha Iyo Sida Uu Fanka Kusoo Galay:
Varun waligiisba wuxuu ahaa wiil dadaal badan waxaana ka weyn wiil lagu magacaabo Rohit Dhawan oo haatan Director Bollywood-ka ka tirsan ah.
Hadaba Varun waxbarashadiisa heer sare ayuu ka gaaray madaama uu dadaalkiisa sareeyay wuxuuna darajada kowaad ee heerka Jamaacada ku qaatay maamulka Ganacsiga (Business Management) asigoo ka qaatay Nottingham Trent University ee dalka UK ku taalo.
Varun Dhawan markii uu Mumbai kusoo laabtay wuxuu qoyskiisa la wadaagay inuu jeceyl yahay filim sameynta sidoo kalena waligiis uu riyaadan qalbiga ku qarsan jiray madaama uu inta badan tagi jiray goobaha aabihiis filimada ku sameyn jiray.
Sidaa darteed Varun oo ah wiil fariid ah wuxuu gacan ka helay filim sameeyaha caanka ah Karan Johar oo Varun ka dhigtay Director caawiye filimkiisii My Name Is Khan (2010).
Madaama Varun oo waaya aragnimo iyo aqoon dheeri ah ka helay shaqadii uu filimkii My Name Is Khan wuxuu bilaabay isku diyaarinta filimkiisii Student of The Year.
Varun waxaa filimkii Student of The Year u sameeyay Karan Johar halka ay la jileen labadii iyagana fanka ku cusbaa Alia Bhatt iyo Siddharth Malhotra.
Varun Dhawan siweyn ayaa loogu amaanay filimkiisii kowaad qaab jilinkiisa dhanka Dance-ga, shactirada iyo sida uu daciifnimada u muujiyay wuxuuna filimkii Student of The Year sameeyay ganacsi weyn asigoo keenay 97 Crore ($14 million) isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka.
Varun Dhawan sanadii 2013 wax filim ah ma sameynin wuxuuna sanadii 2014 la yimid labo filim asigoo xiiso weyn loo qabay aragtidiisa.
Wuxuuna sanadii 2014 ku af bilaabay filimkii aabihiis David Dhawan u sameeyay Main Tera Hero oo ay la jileen Nargish Fakhri iyo Ileana D’Cruz wuxuuna filimkan gaaray guul weyn asigoo sii adkeeyay awooda Varun Dhawan uu gudaha Hindiya ku leeyahay.
Varun iyo fariidnimadiisa waxaa la isla arkay markii filimkii Super Hit-ka weyn noqday uu sameeyay Humpty Sharma Ki Dulhania waxaana la sameesay gabadha ay isku soo baxayaan Alia Bhatt.
Humpty Sharma Ki Dulhania wuxuu sameeyay ganacsi waali ah madaama filimkan isku darka gudaha Hindiya iyo suuqyada caalamka uu kasoo xareeyay 111 Crore ($16 million).
Guushii filimkii Humpty Sharma Ki Dulhania waxay Varun Dhawan ka caawisay inuu noqdo atoore isku filan sidoo kalena xidig soo shaac baxay oo hubaal tahay inuu mustaqbalka Super Star noqon karo.
Varun Dhawan Iyo Markii Uu Wajiga Badashay Iyo Guushii Uu Ka Dhaxlay:
Wiilkan asigoo dhalin yar ayuu aqbalay sameynta filimka Badlapur oo loogu tala galay atoore waaya arag ah oo mudo dheer fanka kusoo jiray.
Varun qaab jiliinka uu filimka Badlapur kusoo bandhigay bilawgii sanadii 2015 wuxuu noqday mid Classic ah weliba dadka filimada ka faaloodoo waxay aad ugu amaaneyn xidigan kartida uu ku qaatay sameynta doorkan sidoo kalena Badlapur wuxuu noqday Hit dhameestiran.
Waxaa kaloo naga xasuusin ah in Badlapur uu Varun Dhawan ka caawiyay inuu u tartamo atooraha ugu wanaagsan ee shirkada Filmfare Awards bixiso.
Varun sanadii 2015 marnaba ma hilmaami karo madaama filimkiisii xigay ee Dance-ga ahaa ABCD: Any Body Can Dance, oo loo gaabiyo ABCD 2 uu guul weyn gaaray sidoo kalena Hit dhameestiran noqday.
Varun filimka ABCD 2 waxaa la sameesay gabadha ay isku soo baxayaan Shrddha Kapoor waxaana aad looga helay Dance-ga uu Varun filimkan kusoo bandhiga sidoo kalena ABCD 2 wuxuu noqday filimkii ugu horeeyay ee xidigan hogaamiye ka yahay kaasi oo 100 Crore badan gudaha Hindiya kasoo xareeyo.
Dhamaadkii 2015 wuxuu Varun Dhawan la yimid filimkii weynaa Dilwale oo ay isla jileen Shah Rukh Khan, Kajol iyo Kriti Sanon
Dilwale wuxuu ahaa mashruuc weyn balse guul dhex dhexaad ah gaaray mana noqonin sidoo kalena laga filaayay laakiin Varun nasiibkiisa meesha kama bixin madaama filimkan darajo ahaan uu noqday (Semi Hit).
Varun Dhawan waxaa sanadkii 2016 usoo baxay filmkii Dishoom ee guusha dhex dhexaadka ah u gaara waxaana filmkaan la jileen John Abraham iyo Jacqueline Fernandez isagoo noqda Average.
Varun Dhawan sanadkii tegey 2017 waxuu la yimid 2 film kuwaaso Super Hits noqdeen waxuuna u aha Varun sanadkaan sanad barwaaqo ah filmadaaas waxay kala ahaayen Badrinath Ki Dulhania iyo Judwaa 2 ayadoo mid waalba darajadaa 100 Crore ka talaabsadeen Super Hits na noqdeen.
Sido kale sanadkaan waxuu la yimid oo hader tiyaatarada u saaran October kaaso la filaayo inuu guul gaari doono hadii mashruucan uu guulesto Varun tijaabo walba uu ka talabasan doona maadmaa October fariintisa reer magaalka kaliya loogu talo galay maalmaha soo socd waxaa la filaa in shabakada BOI ku dhaawaqo doonto natiijada mashruucan.
Varun hader waxuuu duubis kuwada filmada kala ah Sui Dhaaga oo ay la jileyso Anushka Sharma iyo Kalank oo ah mashruu jilayaal badan la isugu keenay oo uu iska leeyahay Karan Johar waxaana sanadkaan la sugaya mashruucisa Sui Dhaaga halka Kalank sanadka dambe la daawan doono.
Varun Dhawan Iyo Hawlaha U Dheer Dhanka Filim Jilista:
Marka laga soo tago filim jilista Varun wuxuu caan ku yahay inuu xafladaha ka cayaro sidoo kalena goobaha abaal marinada kala duwan laga bixiyo xidigan lagama waayo.
Waxaa xusid mudan in shirkadaha waa weyn Filmfare, Screen, Stardust award, IIFA iyo kuwo kale xaflad walbo oo ay sanadaha dhigaan in Varun masraxa laga weynin.
Haka reebin xidigan mararka qaar uu ka qayb qaatao bandhigyada xidigaha Bollywood-ka ay ku dhigtaan meelo ka baxsan gudaha Hindiya ayagoo macaash badan laga helo safaro kala duwan ayay galaan (Tour).
Varun Dhawan Iyo Noloshiisa Gaarka Ah:
Xidigan markii uu Bollywood-ka kusoo biiray waxaa lagu xaman jiray in Alia Bhatt xiriir hoose kala dhaxeeyay madaama ay meel walbo isla tagi jireen.
Balse warkaan xan ma uusan dhaafin wuxuuna iska noqday sheeko iska dhamaatay haatana waxaa la xaqiijiyay in Varun uu saaxiib la yahay gabadha quruxda badan ee lagu magacaabo Natasha Dalal.
Varun iyo Natasha ayaa la sheegay inay haatan aad isugu fiican yihiin madaama labadan lamaane goob walbo lagu arko ayagoo isla socdaan.
Laakiin Varun Dhawan dhawaan wuxuu meesha ka saaray inuu guur diyaar u yahay asigoo sheegay in shaqadiisa Bollywood-ka uu sii wadan doono midaasna waxay ka dhigan tahay in dhawaanahan la arki doonin Varun iyo Natasha oo wada aqal galayaan.
Waxaa Aqrisay 1,732